Puntland oo sheegtay in ifafaale wanaagsan uu ka soo baxayo qoditaanka shidaal ee ceelka Shabeel I. – Radio Daljir
Puntland oo sheegtay in ifafaale wanaagsan uu ka soo baxayo qoditaanka shidaal ee ceelka Shabeel I.
Dubai,Mar 6 -Dowladda Puntland ayaa markii ugu horaysay ka hadashay halka ay marayso qoditaanka shidaal ee laga wado dooxada Dharoor ee gobolka Bari.
Agaasimaha macdanta iyo shidaalka Puntland Ciise Maxamuud Faarax Dhool-Waa oo ku sugan dalka Imaaraatka Carabta ayaa waraysi uu siiyay Radio Daljir ku sheegay inay jirto ififaallo wanaagsan oo la xiriirta in shidaal laga soo saaro Puntland.
Waxaa uu sheegay inaysan jirin wax shidaal ah oo laga soo saaray dooxada Dharoor,balse ay qabaan ifafaallo wanaagsan oo shidaalka lagu soo saarayo islamarkaana ay meel fiican marayso shidaalka lasoo saarayo.
Agaasimaha oo wax laga weydiiyay hanjabaad kasoo yeertay ururka Al-Shabaab oo la xiriirta inay beegsanayaan goobaha shidaalka laga qododayo ee Puntland ayaa waxaa uu tilmaamay hadalka kasoo yeeray Al-Shabaab inuusan wax saamayn ah keenayn.
“Wax saameyn ah haba yaraatee ma keeni kadho,niman tuugo ah oo burcad ah oo umadda Soomaaliyeed dhib ku haya weeye, inay sidaa u dhuumaalaysanayaan oo ay qarka ugalaayaan ay sameeyaan maahinee niman kartidoodu tahay inay kuusoo baxaan maahan”ayuu sheegay agaasimaha macdanta iyo shidaalka Puntland Ciise Dhool-Waa.
Agaasimahaa ayaa waxaa uu sidoo kale sheegay ururka Al-Shabaab inaysan carqalad ku keeni karin heshiisyada dowladda ay ku doonayso inay dalka ku horumariso.
“Dad iyo dalbaa jira, dadka iyo dalkuba waan difaacaynaa qadiyadayada baarista shidaalka afar tuug ah oo qararka ku wareegaya uga baqimayno dowladda iyo shacabkuba diyaar ayay u yihiin”ayuu yiri agaasimaha macdanta iyo shidaalka Puntland Ciise Maxamuud Faarax Dhool-waa.
Hadalkan ayaa waxaa uu imaanayaa xilli bil iyo dhowr casho ay ka harsantahay waqtigii loo cayimay in shidaal laga saarayo gudaha Puntland.